Falcelinta madaxda DF ee Qaraxii Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo ayaa tacsi ka diray, halka Rooble uu ku baaqey in loo midoobo la dagaalanka Al-Shabaab.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxda dowladda waqtiga ka dhamaadey ayaa ka hadlay qaraxii Maanta oo Sabti ah ka dhacay Isgoyska Ceel-Gaabta, kaasoo ay ku dhinteen 8 qof.
Qaraxa oo loo adeegsadey Gaari walxaha qarxa lagu soo xiray ayaa ka dhacay meel u dhaw afaafka Villa Somalia, waxaana dadkii ku dhintay kamid ah Hibaaq oo kamid ahayd Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha oo dhanka arrimaha haweenka qaabilsanayd.
"Allaha u naxariisto Shacabkii ku geeriyooday qaraxii argagixisadu maanta kula beegsadeen Muqdisho.intii dhimatay Allaha u naxariisto, dhaawacyadana Allaha bogsiiyo. Waa in aan isu kaashannaa la dagaallanka argaxisadan hororka ah ee shacabkeenna xasuuqa joogtada ah ku haya," ayuu yiri Rooble.
Farmaajo ayaa isna ka hadlay qaraxa, wuxuuna tacsi u diray ehelka dadkii lagu dilay weerarka, oo ay sheegatay Kooxda Al-Shabaab, kaasoo noqonaya midkii 2aad tan iyo shalay.
"Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoysaska, qaraabada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee ay ka geeriyoodeen Muwaadiniintii ku shahiiday qaraxii bahalnimada ahaa ee argagixisadu ay maanta ka fuliyeen magaalada Muqdisho," ayuu lagu yiri qoraal kasoo baxay xafiiska Farmaajo.
Labada mas'uul ayaa u dhaxeeyay khilaaf xoog leh, kaasoo sababay inuu amniga faraha ka baxo, waxaana kusoo kordhaya Muqdisho qaraxayada maalmihii lasoo dhaafay.
Xiliga kala-guur iyo khilaafka ayay Al-Shabaab ka faa'ideysanaysaa, iyadoo Kooxda ay suurta-gal tahay inay ka fuliso Caasimadda, hadii habacsanaanta amniga ee jirta aan wax laga qaban.